လိုငျစငျမပါပဲ ဆိုငျကယျ အရှိနျပွငျးမောငျးလာတဲ့သူကို ရဲက မှေးနကေိ့တျဝယျကြှေး
Homenewsလိုငျစငျမပါပဲ ဆိုငျကယျ အရှိနျပွငျးမောငျးလာတဲ့သူကို ရဲက မှေးနကေိ့တျဝယျကြှေး
တခြို့တခြို့သော သူတှကေ သိပျကို ကွငျနာတတျကွပါတယျ။ မကွာသေးခငျက ထိုငျးနိုငျငံမှာ ဆယျကြျောသကျကောငျလေး တဈယောကျက ဆိုငျကယျလိုငျစငျ ကတျပွားမပါဘဲ ဆိုငျကယျကို အရှိနျမွှငျ့ပွီး မောငျးလာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ရဲအရာရှိက သူ့ကိုမဖမျးဘဲ မှေးနကေိ့တျနဲ့ မှေးနပှေဲ့ ကငျြးပပေးလိုကျပါတယျ။ ရဲအရာရှိရဲ့ နာမညျကတော့ Kanokpan Putthapong ဖွဈပါတယျ။
" အဲဒီညက ကြှနျတျော တာဝနျကတြယျ။ ဆိုငျကယျတဈစီးက အရှိနျပွငျးပွငျးနဲ့ မောငျးလာတယျ။ မောငျးလာတဲ့သူမှာ ဆိုငျကယျစီး ဦးထုပျလညျး မပါဘူး။ လိုငျစငျကတျပွားလညျး မပါဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ သူ့ကို ဖမျးဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ" လို့ Kanokpan Putthapong က ပွောပွပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဆိုငျကယျစီးလာသူက မထငျမှတျဘဲ ငိုခလြိုကျပါတယျ။ အဲဒါနဲ့ ရဲအရာရှိက ဆယျကြျောသကျ ကောငျလေးကို ဘာပွဿနာ ရှိလို့လဲလို့ မေးလိုကျပါတယျ။ သူ့ရဲ့မှေးနမှေ့ာ မိသားစုဝငျတှကေ တဈယောကျမှ ဂရုမစိုကျ အဖကျမလုပျကွလို့ ဒေါသတှထှေကျပွီး အဈကိုဖွဈသူရဲ့ တိုကျခနျးကနေ ထှကျလာကွောငျး ဆယျကြျောသကျကောငျလေးက ပွောပွပါတယျ။
သူ့ရဲ့အကွောငျးကို သိလိုကျရတဲ့အခါ Mr.Putthapong က အိမျမပွနျခငျမှာ စိတျအေးအေးထားဖို့ ဖြောငျးဖပြါတယျ။ သနားကွငျနာတတျတဲ့ ရဲအရာရှိက ကောငျလေးကို ထိုငျခိုငျးထားပွီး အနီးဆုံး ဆိုငျတဈဆိုငျကနေ ဖယောငျးတိုငျ ထှနျးထားတဲ့ မှေးနကေိ့တျတဈလုံး ဝယျလာပါတယျ။
ရဲအရာရှိက ဆယျကြျောသကျကောငျလေး ပြျောသှားအောငျ မှေးနကေိ့တျကို မှေးနလေ့ကျဆောငျ အဖွဈ ပေးလိုကျတာပါ။ ရဲအရာရှိရဲ့ ကွငျနာတတျမှုကွောငျ့ ဆယျကြျောသကျကောငျလေးက ပြျောပွီး မကျြရညျတှပေါ ကလြာပါတယျ ။
ရဲအရာရှိက သူ့ရဲ့ facebook မှာလညျး "Happy birthday, bro. This year, the police will buy youabirthday cake." လို့ရေးပွီး ဓါတျပုံလေးလညျး တငျထားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Mr.Putthapong ရဲ့ postက ဖယျရှား ခံလိုကျရပါတယျ။ အငျတာနကျ အသုံးပွုသူတှေ ကတော့ ရဲအရာရှိတဲ့ ကွငျနာတတျတဲ့ စိတျထားကောငျးလေးကို ခြီးကြူးနကွေ ပါတယျ။
လိုင်စင်မပါပဲ ဆိုင်ကယ် အရှိန်ပြင်းမောင်းလာတဲ့သူကို ရဲက မွေးနေ့ကိတ်ဝယ်ကျွေး
တချို့တချို့သော သူတွေက သိပ်ကို ကြင်နာတတ်ကြပါတယ်။ မကြာသေးခင်က ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေး တစ်ယောက်က ဆိုင်ကယ်လိုင်စင် ကတ်ပြားမပါဘဲ ဆိုင်ကယ်ကို အရှိန်မြှင့်ပြီး မောင်းလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရဲအရာရှိက သူ့ကိုမဖမ်းဘဲ မွေးနေ့ကိတ်နဲ့ မွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပပေးလိုက်ပါတယ်။ ရဲအရာရှိရဲ့ နာမည်ကတော့ Kanokpan Putthapong ဖြစ်ပါတယ်။
" အဲဒီညက ကျွန်တော် တာဝန်ကျတယ်။ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးက အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ မောင်းလာတယ်။ မောင်းလာတဲ့သူမှာ ဆိုင်ကယ်စီး ဦးထုပ်လည်း မပါဘူး။ လိုင်စင်ကတ်ပြားလည်း မပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် သူ့ကို ဖမ်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်" လို့ Kanokpan Putthapong က ပြောပြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဆိုင်ကယ်စီးလာသူက မထင်မှတ်ဘဲ ငိုချလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ရဲအရာရှိက ဆယ်ကျော်သက် ကောင်လေးကို ဘာပြဿနာ ရှိလို့လဲလို့ မေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာ မိသားစုဝင်တွေက တစ်ယောက်မှ ဂရုမစိုက် အဖက်မလုပ်ကြလို့ ဒေါသတွေထွက်ပြီး အစ်ကိုဖြစ်သူရဲ့ တိုက်ခန်းကနေ ထွက်လာကြောင်း ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးက ပြောပြပါတယ်။
သူ့ရဲ့အကြောင်းကို သိလိုက်ရတဲ့အခါ Mr.Putthapong က အိမ်မပြန်ခင်မှာ စိတ်အေးအေးထားဖို့ ဖျောင်းဖျပါတယ်။ သနားကြင်နာတတ်တဲ့ ရဲအရာရှိက ကောင်လေးကို ထိုင်ခိုင်းထားပြီး အနီးဆုံး ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကနေ ဖယောင်းတိုင် ထွန်းထားတဲ့ မွေးနေ့ကိတ်တစ်လုံး ဝယ်လာပါတယ်။
ရဲအရာရှိက ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေး ပျော်သွားအောင် မွေးနေ့ကိတ်ကို မွေးနေ့လက်ဆောင် အဖြစ် ပေးလိုက်တာပါ။ ရဲအရာရှိရဲ့ ကြင်နာတတ်မှုကြောင့် ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးက ပျော်ပြီး မျက်ရည်တွေပါ ကျလာပါတယ် ။
ရဲအရာရှိက သူ့ရဲ့ facebook မှာလည်း "Happy birthday, bro. This year, the police will buy youabirthday cake." လို့ရေးပြီး ဓါတ်ပုံလေးလည်း တင်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Mr.Putthapong ရဲ့ postက ဖယ်ရှား ခံလိုက်ရပါတယ်။ အင်တာနက် အသုံးပြုသူတွေ ကတော့ ရဲအရာရှိတဲ့ ကြင်နာတတ်တဲ့ စိတ်ထားကောင်းလေးကို ချီးကျူးနေကြ ပါတယ်။